century commercial bank limited(century commercial bank limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
आन्तरिक विप्रेषणमा सहज बन्दै सेञ्चुरी बैंक, अब मोबाइल एपबाटै रेमिट्यान्स पठाउन सकिने
काठमाण्डौ। सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले आफ्नो ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै मोबाइल बैंकिङ एप सेञ्चुरी पेबाट अनलाईन आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा पनि प्रदान गर्ने भएको छ। यसअन्तर्गत सेञ्चुरी रेमिट (रेमिट्यान्स सेवा) मोबाइल बैकिङ एपमा थप गरिएको छ। यो सेवा सञ्चालनमा आएसँगै बैंकका ग्राहकले आन्तरिक विप्रेषण सोझै मोबाइल बैंकिङ एपबाट...
सेञ्चुरी बैंकको नयाँ बचत खाता ‘सेञ्चुरी रेमिट प्रिमियम अकाउन्ट’, आकर्षक ब्याजसहित यी सेवा निःशुल्क
काठमाण्डौ। सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले आफ्ना ग्राहकको मागलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ बचत खाता ‘सेञ्चुरी रेमिट प्रिमियम अकाउन्ट’ को शुभारम्भ गरेको छ। रु. १ हजार न्यूनतम मौज्दात भएको उक्त खातामा वार्षिक ५.५०% को दरले त्रैमासिक रुपमा ब्याज भुक्तानी गरिने बैंकले जनाएको छ। यस खातामा अन्य बचत खातामा भन्दा १% बढी ब्याज भुक्तानीका साथसाथै...
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले कर्णाली प्रदेशका कृषकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले कर्णाली प्रदेशका व्यावसायिक कृषकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ। यस विषयमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ। मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको “व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यावसायका लागि...
केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा आएका खबरप्रति सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको ध्यानाकर्षण
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा बैंकका विषयमा प्रेषित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बैंकले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस बैंक र बैंकका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठ, सञ्चालक तथा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध भ्रामक र कपोकल्पित समाचार केही अनलाइन संचारमाध्यममा समाचार प्रेषित...
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा मनोज न्यौपाने नियुक्त भएका छन्। बैंक सञ्चालक समितिको हिजो असार ३० गते बसेको बैठकले न्यौपानेलाई भोलि साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी कामु सीईओमा नियुक्त गरेको हो। न्यौपाने यसअघि सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकमा नायब सीईओ थिए। सोही बैठकले सीईओ तुलसीराम गौतमको...
काठमाण्डौ । सञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बाट तुलसीराम गौतमले राजीनामा दिएका छन्। हिजो आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा सीईओ गौतमले राजीनामा दिएका हुन्। गौतम २०७५ वैशाखबाट सञ्चुरी बैंकको सीईओका रुपमा कार्यरत छन्। यसअघि गौतम इक्रा नेपालका सीईओ थिए। इक्रा नेपालमा जानुअघि उनी माछापुच्छ्रे...
सेञ्चुरी बैंकद्वारा दोहोरो अंकको लाभांश दिने प्रतिबद्धता
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले आफ्नो दशौं वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रमकासाथ सम्पन्न गरेको छ । दशौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय पुतलीसडकमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बैंकका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठले १० वर्षअघि ‘सरल बैंकिङ्ग सबैंका लागि’ भन्ने नाराका साथ स्थापित...
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकको सेवामा थप विस्तार गर्ने उद्देश्यले पर्सा जिल्लाको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका ४ को देवरवानामा शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु गरेको छ । शाखारहित बैंकिङ सेवाको शुभारम्भ शनिबार प्रमुख अथितिका रुपमा प्रदेश २ का विधायक मन्जुर आलम र विशेष अथितिको रुपमा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका...
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले आज मंगलबारबाट काठमाण्डौको बालाजु र गौरीघाट नयाँ दुई शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । देशका सुगम तथा दुर्गम सबै क्षेत्रसम्म बैंकिङ सेवाविस्तार गर्ने उद्देश्यले यसअघि बैंकले विभिन्न स्थानमा शाखा, शाखारहित बैंकिङ सेवा तथा एक्सटेनसन काउन्टरहरु सञ्चालनमा ल्याई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको...
रुपन्देहीको बगौलीमा सेञ्चुरी बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा
काठमाण्डौ। सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने क्रममा रुपन्देही जिल्लाको मार्चवारी गाउँपालिकाको बगौलीमा आज बुधबारबाट शाखारहित बैंकिङ सेवा प्रारम्भ गरेको छ। उक्त शाखारहित बैंकिङ सेवाको शुभारम्भ एक कार्यक्रमका बीच मार्चवारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुनिता कलवार जैसवालले गरेका छन्। यस सेवाबाट बगौलीलगायतका...
सेञ्चुरी बैंकले आठबिसकोट क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने
काठमाण्डौ। कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकतामार्फत आत्मनिर्भर नगरपालिका निर्माणका लागि सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र आठबिसकोट नगरपालिका (पश्चिम रुकुम) बीच सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ। रुकुमको आठबिसकोट नगरपालिकामा “कृषक सहकार्य समूह” मार्फत त्यस क्षेत्रमा सम्भावना भएका कृषि, वनजन्य व्यवसाय,...
काठमाण्डौ । गत दुई आर्थिक वर्षको लाभांश पारित गर्दै सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको नवौँ तथा दसौँ वार्षिक साधारणसभा बुधबार सम्पन्न भएको छ। काठमाण्डौको भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा सभा सम्पन्न भएको थियो। सभाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट चुक्तापुँजी रकम रु. ८ अर्ब ४१ करोड ५४ लाख ७१ हजार ५७६.३० रुपैयाँको ४.७५...
यी हुन् सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका दुई मस्कट : ‘सरल’ र ‘शताब्दी’
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले आज आफ्ना दुईवटा मस्कट सार्वजनिक गरेको छ। बैंकको व्यवसाय प्रबद्र्घन, पहिचान र प्रचारप्रसार गर्नका साथै बजार विस्तार गर्नका लागि सरल र शताब्दी नामका दुईवटा मस्क सार्वजनिक गरेको हो। यसपश्चात बैंकको बैंकिङ अनुभवलाई अझ सरल र सुरक्षित बनाउन र बैंकले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा र सुविधा तथा...